Breaking: Tababare Klopp Oo Ka Tegay Dortmund, Ilmo Qoysay Indhiisa iyo City Oo Diyaar U Ah
HomeWararka MaantaBreaking: Tababare Klopp Oo Ka Tegay Dortmund, Ilmo Qoysay Indhiisa iyo City Oo Diyaar U Ah
Borussia Dormund ayaa xaqiijisay in uu ka tegayo tababaraheeda Jurgen Klopp xagaaga soo socda.
Shir jaraa’id oo ay ka soo qayb galeen madaxda iyo tababare Klopp ayaa waxa uu ku dhamaaday murugo iyo ilmo qoysay tababaraha kooxda ka tegaya, kaas oo madasha ka sheegay in kooxdiisu ay u baahan tahay isbeddel, sidaas daraadeedna uu uga tegayo kooxda.
Klopp Oo sannadkii 2008 kooxdan la wareegay ayaa u horseeday guulo badan, isagoo horyaalka u qaaday sannadihii 2011 iyo 2012, isla markaana sannadkii ku xigay soo gaadhay finalka Champions League. Labadii sannadood ee u dambeeyeyna waxay kooxdaasi ka gashay kaalinta labaad ee horyaalka, laakiin sannadkan ayuu hoos u dhac ku yimid, iyadoo hadda ku jirta kaalinta 10aad, isla markaana aan rajo ka qabin in ay u soo baxdo Champions League sannadka dambe.
Warar soo baxay maanta gellinkii hore, ayaa sheegay in tababarahan 47 jirka ahi uu weydiistay kooxdiisa in ay baabi’iso heshiiskii ay ku wada jireen, laakiin saacado kooban kadib ayaa shir jaraa’id oo ay kooxdu qabatay waxay ku shaacisay in ay ogolaatay dalabka tababare Klopp isla markaana uu ka tegi doono naadiga bisha June.
Tababarihii hore ee kooxda Mainz ee Thomas Tuchel ayaa la filayaa in ay kooxdu magacowdo marka uu tago Klopp.
Warar kale oo la isla dhex marayyo ayaa waxa ay sheegayaan in tababare Klopp uu ku sii jeedo Manchester City oo la filayo in ay shaqada ka erido Manuel Pellegrini.
Manchester United Oo Iska Xaadirisay Wareegga 4aad Ee FA Cup